Ogeejjiiwwan LibreOffice Calc keessaa
ogeejjiwwan armaan gadii LibreOffice Calc keessatti fayyadamu dandeessa:
Ogeejjiwwan kunnen firiiwwan lakkoofsa kennu.
^ (arfii hoxxee)
Ogeejjiiwwan kunnen dhugaa ykn soba deebisuu.
= (mallattoo wal qixaa)
> (Irra guddaa)
< (Irra xiqqaa)
>= (Irra guddaa ykn walqixa)
Irra guddaa ykn walqixa
<= (irra xiqqaa ykn walqixa)
Irra xiqqaa ykn walqixa
Ogeejjiin barruuwwan adda addaa gara barruu tokkootti maka.
walitti fidinsa barruu AND
"Sun" Fi "day"'n "Sunday" ta'a
Ogeejjootni kunneen hangii man'ee duwwaa,tokko ykn man'eewwan baay'ee kenna.
Hangiin dursaa olaantoo qaba,itti ansuun walkipha,fi xumura irratti walitti makuu qaba.
! (Tuqaa raajefannoo)
Ida'amaa man'eewwan walkipha keessaa huundaa shallaga;fakkeenya kana keessatti,firiin ida'ama man'eewwan B5 fi B6 kenna.
Walitti fidinsa ykn walitti makuu
Wabiiwwan lama fudhachuun tarree wabii kenna,kunis walitti fidinsa wabii bitaa kan wabii mirgaan hordofamee fudhata.Galinsii dabalata lama wabeeffama.Yadannoo gabatee armaan gadii jalatti argamu ilaali.
Walitti fidinsi wabii arfii dalduufaa fayyadamun ogeejjii haraa,OpenOffice.org 3.0 and StarOffice 9 waliin eegaluun jiraata.Yommuu formuulaan ogeejjii dalduufaa galmee kan foyya'oota duraa sooftiweerii banee waliin jiraatee,dogoggorri ni deebisama.Warantoo himannoo keessatti tarreen wabii hin heeyyamamu.
Title is: Ogeejjiiwwan $[officename] Calc keessaa